ဒီနေ့တော့ လက်ဖက်သုပ်လေးပဲ သုံးဆောင်သွားအုံးနော်။ ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေး သုပ်ထားတယ်။ စပ်ရင် ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်နော်။
ရေနွေးကြမ်းနော်။ တော်နေ ဘီယာထင်နေမှာစိုးလို့။ :D
Posted by မိုးကောင်းသူ at 12:10 PM
အား!!!!!!!! လက်ဖက်တစ်ဇွန်း တိတ်တိတ်လေး နှိုက်စားလိုက်တာ ငရုတ်သီးမိသွားတယ် ရေနွေး ရေနွေးပေး!!!!!!